विवादमा खनालः जागिर सशस्त्रमा, डियुटी भारतीय दूतावासको ! | Citizen Post News
विवादमा खनालः जागिर सशस्त्रमा, डियुटी भारतीय दूतावासको !
२०७६ असार ३ गते ०९:१९
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरेको अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलको मर्म र भावनाविपरीत वर्तमान आइजीपी शैलेन्द्र खनालले काम गरिरहेको आरोप छ । उनले सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको संख्या २ नं प्रदेशका ८ जिल्लाबाट घटाएर पहाडतिर थुपारेका छन् ।
म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थी भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन् । त्यसलाई रोक्न नेपालका सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त सशस्त्र प्रहरी छैन । नेपाल प्रहरीको काम अपराध र भन्सार छली रोक्नमै सीमित भएकाले रोहिंग्या शरणार्थीको हुलै भारतले नेपालतर्फ पठाएर अस्तब्यस्त पारिदिन सक्छ । सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्–‘यस्ता संवेदनशील कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईको ध्यान पुग्नुपर्छ । किन २ नम्बर प्रदेशमा दरबन्दी कटौती भयो ? यसमा ग्रान्ड डिजाइन छ, सचेत हुनुपर्छ ।’
मन्त्रिपरिषदले २ नम्बर प्रदेशमा सशस्त्रको दरबन्दी घटाएको छैन । तर मन्त्रिपरिषदको स्वीकृत दरबन्दी संरचना भन्दा फरक दरबन्दी र कार्यालय थपघट आइजीपी खनालले कसको इशारामा गरेका हुन् ? पछिल्लो पटक २ नम्बर प्रदेशमा दरबन्दी घटाएपछि त्यहाँका कुनै जिल्लामा ठूलो घटना हुँदा ९ जिल्लाको सशस्त्र प्रहरी खटाउँदा पनि हल हुन नसक्ने सशस्त्रका अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा एउटै जिल्लामा पर्याप्त सशस्त्र प्रहरी हुँदा एमालेको मेची–महाकाली अभियानमा राजबिराजमा भएको हुलदंगा नियन्त्रण गर्न सफलता पाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको दरबन्दी तलमाथि गर्न पाइदैन । तर आइजीपी खनाल मन्त्रिपरिषद भन्दा माथि गएर तराईमा दरबन्दी घटाउने र पहाडमा बढाएका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा पनि दरबन्दी थपघट देखिनेछ । यदि संख्या तलमाथि गरेको भए तलवबापत दिएको रकम नै बेरुजु देखिनेछ । सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी खनालले दरबन्दी समायोजनका क्रममा आफैं मनपरी दरबन्दी घटबढ गर्ने र ओएण्डएम पनि आफैं गरी आफैं सदर गरेका छन् । जबकि ओएण्डएम माथिल्लो निकाय मन्त्रालयबाट सदर गराउनुपर्ने हुन्छ । साँघु साप्ताहिकबाट